Jidka cusub ee u furmaya Nolosha Qoysaskeenna. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in Kobciye September 30, 2018	0 1,706 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Wada noolaanshaha waxa ay ku haboontahy jecel iyo ku qanacsanaan ay isku qanacsanyihiin labada qof ee doonaya in ay wada noolaadaan, hadaba side loo heli karaa qoysas kuwada nool jeceyl iyo is marxabeyn? Heer intee la’eg ayuu la egayhay ku noolaanshaha jaceylka ee qoysaska Soomaaliyeed? Su’aalaasi waxaa ka jawaabaya Sheikh Ahmed Jowhari oo inta badan ka shaqeeya wacyi galinta bulshada iyo qoysaska sida ay u isku raagi lahaayeen:
“Bismillahi Raxmaani Raxiim, Aad baad u mahadsantihiin Bahda Radi Himilo waa wax aad u qiimo badan dadkeena Soomaaliyeed inay ku baraarugaan loo baahan yahay. Horta Anaga waxaa dhisnaa qoys, waxaa diyaarinaa labada qof ee dhisaya qoys.
Qoyska sidaa ogtahyna waa wiil iyo gabar is guursada oo ka gudbay wiil iyo gabarnimadii oo xaas noqday markaa kadib haddii Ilaah Ubad siiyana saddex bay noqdeen iyo kasii badan, yacni way bateen lamaanihii oo labo way ka baxeen qoys bay noqdeen.
Waxaa rabaa inaan sheego in ay jirto wax isku keenaya marka hore labada ruux oo ah inuu jiro xiriir/dareen dhex maraya; dareenkaas ayaa la yiraahdaa Jeceyl; Su’aalaha imaan kara ayaa markaas ah, Jeceylkaas goorma ayuu yimaada ma guurka kahore mise guurka kadib? Anigu waxaan ku jira dadka qaba in dareenkaas jeceyl uu yimaado Kahor guurka iyo Aqal galka; maxaa yeelay dareen baa ku galay dareenkii baad rabtaa inaad hirgaliso guurkana waa meesha lagu hirgaliyo jeceylka.
Wey dhici kartaa in ay dadka qaar ka wada doodaan oo arrinku sidaa ma wada aha, waa sax mawada aha bulshada iskuma wada guursadaan jeceyl iyo sheeko dhex martay: dad la’isku daraa jiro, dad iyaga oo waligood is arag la isa siiyaa jira, qaarkood siyaabo badan isku guursada la heli karaa, waxaad arkeysaa kuwo dano isku guursaday. Marka waxaa kusoo koobi lahaa asalku waxaa weyaan labada qofi in wada qaadaan dareen jeceyl oo qofba qofka kale ku xiraya oo aanan ahayn inu qofkaa maslaxa ( dan) meeshaan ku joogo, sababta oo ah berri – marka ay meesha ka baxdo dantii marka horaba jeceyl majirine waad iskaga tageysaa.
Hadii aan usoo laabto intee buu la’eg yahay jeceylka qoysaska Soomaalida dhex yaala? Horta wali halbeeg mala saarin oo majiro cabir ama qiyaas sax oo lagu dhawaaqi karo, laakiin aniga waxaa aminsanahay markaa aad fiiriso dadkeena Soomaalida iyo dhaqankii baadiyaha ama qaabka loo soo ban-dhigayo markaa eegto jeceylkeena, wali waxa uu taagan yahay sugaanta, heesaha waa lala muraaqooda marka la dhageysnayo, aad baa loola qiiroodaa gabayada gabadha qurxudeeda ka hadlaya, kuwa ka hadlaya wiilka kartidiisa iyo kuwa laga tiriyey qoys wanaagga.
Haddaba maxaa keenay inuu yaraado jeceylkaas reeraha dhexdooda ah, ileen markii lawada haasaaweyey Abaayo Macaaney, Aboowe Macaanow aduunkaba keligaa baa jira baa la is-lahaa? Waa tahay! xagee ka baxdaa marka guriga la yimaado.Waxay u baahan tahay arrinkaa in la fahmo, maxaa keena inay yaraato; aniga waxaa leeyahay jeceylka waa jiraa; in la is jeclaadana waa arrin jirto oo waa wax qofka ku qasbeysa inuu helo qofka kale oo uu uga maarmo una dabo socdo uguna dulqaadanaayo culeysaad walba oo kasoo wajahaya, uuna rabo inuu maqlo codkeeda/codkiisa, inuu arko / aragto waa waxa qofka ka dhigaya, waana waa wax rabbaani ah oo Illaah Qur’aankiisa ku sheegay (وجعل بينكم مودة ورحمة) .
Mawaddada culimada casrigaan joogta waxa ay ku sheegaan hamuun; Hamuunta qalbigiisa ku jirta ee qofka kalana dareenka farxadda gelinaysa ama dareenka jeceyl ama kalgaceyl, taas baa marka kugu laraysa qofka kale inuu muuqiisa ku qurxoonaado; inuu hadalkiisa ku deeqo; inuu waxa uu sameynayo ku cajabiyo; kusoo jiito qofkani. Marka waxaa leeyahay anigu, waxay u baahan tahay inaan barano.
Raggu waa ay ka xishoodaan gaar ahaan raga waaweyn inay tilmaamaan – ay cabiraan taasi waxa ay sababtay in wiilasha dhalinyarada ah xittaa iney qaadaan waddadii aabayaashooda ….. marka gabdhuhu wey ka duwan yihiin ragga iyagaa ugu badan dhinaca jaceylka marka la fiiriyo, haddii nisbo la yiraahdo hala tiriyo gabdhahaa ka badan cabiraadda, dareenka jaceyl ay wiilka u qabto gabadha si fudud ayey ku cabiri kartaa, laakiin wiilka lama barin waxa la dhahay wiilka ha is daciifin, waxaana la yiri waxa loo arkaa inuu daciif yahay qofka sheega inuu qof kale jecel yahay caadi iska dhig baa lagu leeyahay, is adkee! marka wiilka talooyinkaas ayaa ku socda, gabadha ha isku jabin ayaa la leeyahay haddii kale wey kugu dul socone ee iska jir .
Maalin ayan meel wiilal ku wada hadleynay oo talooyinkaas ka socdo wiil ayaa ka waramay oo waxa uu dhahay aniga markan guursanayey talooyinkaa ayaa la isiiyay waxaana la igu yiri; is adkee gabadha markad guursaneysid oo aad mehrineysid dhulka ha is dhig-dhigin haddii kale wa lagu jiidaa, marka waa qof lasoo cabeeyay.
Gabdhune waa sidoo kale, waxaa la leeyahay ninka lis (micnaha ka aruuri xoolaha yar uu hayo), marka waxa la isku soo diray labo qof oo cabeysan, marka maxad ka sugeysaa labo qof oo isku cabeysan oo midba midka kale iska ilaalinayo, marka ay wax yar joogaan sannad ama lix bilood waxaad arkeysaa in madaxa la is darayo oo meesha waxa imaneysa ku arkay oo ku dooqay, markay noqotana ku arkay oo ku dhadhamiyey, waxa ku xigta ku dhadhamiye oo ku furay wa mushkilo marka taagan.
Marka hore, Islaamku waxa uu inoo jeexay waddo ballaaran oo wada naqaano oo qof la arkabo uu rabo in uu maro, tusaale wiilka hadduu doono duurka isaga oo jiro balwadda sida qaadkana iska leh ama kan xittaa ugu liito oo aan akhlaaq laheyn hadii aad weydiiso gabar noocee ah baad rabtaa,waxa uu ku leeyahay; gabar xijaaban oo aqlaaq leh oo diin leh oo aabaheyd iyo hooyadeyd si fiican usoo koriyeen baan rabaa. bal u fiirso! Waxan is weydiiyay aniga caqliyadaas maxay tahay, ninka ceynkaa u eg asagu, muxu u rabaa gabadha ceynkaas dahabka u ah, muxuu isagu isaga dhigi waayey oo isku fiirin waaye uu u dhihi waayey; aniga gabadhu waxay rabtaa nin caqli badan oo nadiif ah; nin mutacalim ah nin sidaa ah magaratay – marka waxaa meesha kaaga soo baxayso in marka gabdhaha ay aad qiimahooda u sarreeyaan, macnaheedu kama dhigna wiilashee ka qiimo badan yihiin laakiin bulshadeenna waxay tahay bulsho qiimeysa gabadha, maxa yeelay diin baanu ku saleysannahayoo diinteenaa gabadhu waxay ka tahay oo sikin u fiirso.
Gabadhu waa hoygii loo soo hoyanayey, waa meeshii loo soo noqonayey, wax walba oo macaan ah oo wanagsan laga soo qaadanayey, waxa sidoo kale cajiib ah gabadhu wa beertii la beeranayey, nin baa wuxuu yiri; wa meel wax lagu shubto gabadhu, waxa aad ku shubato nooca uu yahay baa kaaga soo baxaayo; hadda beertu haddii aad dacar beerato dacar baa kaaga soo bixi, haddii aad timir beeratana, timir baa kaaga soo bixi sooma ahan? Diinteena sidaa bay ina fartay, marka su’aasha la isweydiiya waxay ma isku dooranaa sidii la ina faray, ma isku dooqanaa sidii naloo sheegayoo Sunnada Illaahy noogu talo galay?
Anigu waxan aaminsanahay inta badan wey dhacdaa oo dadku markay is guursanayaan sidaa ayey isku guursadaan, laakiin mushkilaa jirto, ma aragno, kuwaas wa nagu badan yihiin laakiin waxaan aragnaa inta fool xun, inta sida qaladka ah isku doorato, maxa yeelay inta burburtay waaye iyagu – bal u fiiri, bulshadaan oo dhan waa bulsho wanaagsan oo fiican waan qarinaa fiicnida, marka hadda sow jaceyl iyo farxad iyo qoys fiican kama hadleyno, dad badan wa ay la yaaban yihiin. Maalmihii ugu horeysay oo aan barnamijka bilaabeynay dad badan baa inala yaabayey, laakiin marka aan dhahnay …….
(فحدث ربك بنعمة ( واماnimcada hal qariyo illaahay madhihin, Ilaah waxa uu ina baray uu inoo sheegay inaa wanaaga faafinno oo aan umadda barno wanaag innagu caksigii baan sameynay. Marka waxa nagala rabaaa inaa joojino faafinta xumaanta oo aan dhahnaa dad qurux badan baa jira, qoysas wanaaga iyo sunnaha raacayaa jira oo u baahan in la arko oo dadka ogaadaan waxa laga barto.
Haddii aan usoo noqdo gabadha, waxaa laga rabaa in wiilka ay dooraneyso ka fiiriso cibaadadiisa, ku xirnaanshaha masjidka; sidee ayuu ku yahay?. Waa in ay ka fiirisaa dacwada, waxaa ku xigto oo la sheegay waa inay ka firiiso akhlaaqda (dabciga) dulqaadkiisa, baqiil miyaa ma qof kaftamayaa mise waa qof xirxiran. Imtixaan oo iska tijaabi wiilka, wiilashuba waa ay imtixaanaan gabdhaha marka tijaabi adoo ku xad gudbeen qofka.
Marka haddii aan soo koobo waa in lagu saleeyaa ku xirnaanshaha Illaah, halagu saleeyo aqoonta waliba inaad aqoonta ka tihiin isku heer ugu yaraan, in la yaqaano xirfado, balse doorashadu yey noqon muqaalka kore, waqti hala galiyo in la is barto si fiican waliba. Yuu ku xiran yahay yacni yuu saaxiibo la yahay iyadu yeey saaxiib la tahay waa muhiim in la ogaado arrinkaas.
Dadka aan fursada u helin waxbarasho waxaa wanaagsan in manta ka faa’ideystaan, waayo aqoontu waa waxa dhisaya akhlaaqdaada iyo toosnaanta dadnimo. Ma rabtaa inaad wax noqoto? Marabtaa inaad isbadasho? Marabtaa inaad hormarto? Ileen adiga ayay wax walba kugu xiran yihiine xaaladda aad ku jirto isku day inaad waxbarato oo caqligaaga kobciso, inaad la socoto oo saxiib ka dhigato dadka kaa horreeya haka xishoon wax baa kaa fa’iideysaa.”
Q: Isbadrashadu waxa ay kaalmeysaa noqoshada qoys adag, reerka la dhisayo waliba waxa ay ku xiran tahy inta la isla qaato waqti iyada oo ay tahay muhiimadu mid tabta togan ee lagu gaarayo gun-dhig hagaagsan iyo reer baraara, hadhowna ay yaraato kala taga reeraha ama furiinka, taa caksigeeda waxaa suura-gal ah is barsho la’aanta labada ruux inay horseedo in hadhow ay soo baxaan dabeecado aan la isku ogeyn, kuwaas oo keeni kara burbur qoyskii cusbaa. Waxaa furiin ku badan reeraha bulsho ahaan maxaa sabab u noqon kara? Iyadoo ay jirto in dadka ku andacoodaan waa xal! Haddaba goormuu ayuu xal noqon karaa furiinka?
Jowhari: “Horta ma aqaan meel ay ku taallo aayad dhaheysa gabadhaa hadda guursatay fur; Suuratul Dalaaq iyo Nisaa, labaduba waan wada aqrinaa. Furiinku waa marka labada qof loo maaro waayo oo ay iskeeni waayaan ashqaasta nolosha ka dhaxeyso, waa xalka ugu dambeysa oo uu noqdo lagama maarmaan oo la’aantii mooyaane si wax qabsoomeen marka ayuu furiinku banaan yahay, maxaa la raba in la sameeyo si loo badbaadiyo furriinka furas badan ayaa ka horreeya sida: haddii la is qabto hoyga gogosha la iskaga baxo, hala kala aamuso waqti mucayin ah, hala is tuso qofba waxa uu ku qaldan yahay qofka kale intaas waa ciqaab lagu xalin karo. Anigu furiinku masoo dhaweenayo, reer aan dhisayna marabo inuu burburo reeraha aan dhisno inay raagaan ayaan rabnaa.
Furiinka waxaa keenaya ahmiyad uu lahaa guurkaa ayaa la ilaawsan yahay, Guurku waa cibaado sida aad salaadda u dukaneyso ducadii waa cibaado, soonku waa cibaado, guurka iyo qoyskuna waa cibaado mar haddii aan Muslimiin nahay, tarantu aadanaha waa guurka dhisnaanshaha qoysaska qeyb ayay ka tahay, marka furriinka qeyb ayay ka tahay qolka jiifka oo an quruxsaneyn Nabiguna arinkaa wuu ka dardaarmay.
Friinkaan tirada badan waxaa keenay ku dhadhimayey oo ku nacay; asalba waxaa loo socday dhadhamo oo mala laheyn ujeeddo rabitaan sax ah, waa in la barto asbaabaha keenaya furriin iyo kala tag. Haddii ay jiraan reero qarka u saaran inay dumaan maxaa la gudboon; waa in la is weydiiyaa maxaa u ogolaaneysay noloshaan oo wiilkaan/gabadhaan usoo raaceysay, in la yiraahdo Illaah u noqda. Tan xigta waa in aad is weydiisaan ‘wiilyahow markaa maanta ka baxdo ee gabdhaan furto maxaa gurigaaga kale la tagi doontaa?’ Gabarta leh; madaxeyga miiska saar kani markuu ku furo xagee tageysaa oo ninka kale maxaa ula tagi dontaa ma adoo nooc kale maa u tagi doonta?!
Q: Isla guursiga kawaran isaga qeyb maka yahay furiinka waajibaadka oo laga soo baxeen?
Jowhari: Horta gabdhuhu ma waxay diidan yihiin aayadda baneeysa taranta Islaamka? Ma u maleenayo inay jirto gabar Muslimad oo Soomaali ah oo diidaysa arrinkaa. Waxaa is wediin leh maxay diidan yihiin gabdhuhu? Waxay kuu tilmaamayaan hablaha marka aad la sheekeysato la dhaqanka inuu isbadalayo wiilka, in laga eexanayo reerkii weynaa iyada oo weyneysa waxii ay shalay heli jirtay.
Maxaa laga rabaa marka ninka doonaya inuu guursado isaga oo ixtiraamaya diinta dhaqanka iyo qofnimada reerkii dhisnaa, isaga oo ku galaya balan inuusan dayici doonin reerkaa dhisan hooyada iyo carruurteedaba: majireyso gabar diidi laheyd in qof walaasheed ah inay reer yeelato. Tusaale hadii aan usoo qaato, ‘hooyo haysta gabar 25jir ah iyo ka badan miyey dooni laheyd in hooyadaa u joogto gabadheyda waa maya’. Waxaa soo socda Xadiithkii Nabiga N.N.K.H in halkii nin ay 50gabdhod kusoo aadi doonaan.
Arinta taranta ee hablaha badan in la guursado ayaa u baahan daraaseyn, qofkaan sameenaya maxaa looga baahan yahay? Waxaa looga baahan yahay cadaalad inuu la yimaado.
Gabdhuhu ha ogaadaan ninka xilli walba damac ayaa ku beeran kaas oo ah inuu guursado gabar kale 20jir ama 80jir midka uu doono ha ahaado, gabadha iyada laga rabaa inaysn sii raacin lana sheekesato wiilka u dhaxaya. Mararka qaar reeraha ayaa kugu qasbaya inaad guursato, saaxiibadaa kugu qasbi, Sheikh hadii aad tahay kaba sii daran dadkaa ku siinaya. Si walbo waa in la qadariya dareenka qofka (gabdha/wiilka).
In la qariyo maxaa keenaya? Wiilka waxa uu ka baqayaa haddii uu u sheego amay wax kaa kala daadisaa, gabdhaha qaar ayaga sabab u ah. Waxaa amaanayaa in la isla tashado wiilyahow gabadhaada la tasho oo la fariiso, gabaryahay adna haka eegin dhanka taban un ee dhageyso seygaaga oo taranta Ilaah amray ogolow.
Q: Nagaashaha qoyska waxa ka qeyb qaata isu nuglaasha laba ruux iyo xil la iska saaro dhisnaanta reerka, waxaa jira reero ay suuragal tahay inuu dhisan yahy muddo 30sano ka badan, maxaa sabab u ah maxaysa tahay sirta ku jirta?
Jowhari: “Waxaa haboonaan laheyd in la weydiiyo reer ceynkaas ah waa buuxaan waana la heli karaa, balse haddii aan wax ka dhaho, horta waxaa muhiim ah aadna qeyb kaga ah arrintaas ku xirnaanshaha laba qof ee Alle, qoys hoggaankiisu Alle loo dhiibay suu ku burburaahi way adag tahay, markaa sidaa leeyahay micnuhu maaha in salaad la dukadaa uun ee Illaah ku xirnaan dhab ah ayaan ka hadlayaa. Dadka qaar ayaa ku doodaya waxaa jira reero aan Muslim ahayn oo reerahoodu ay raageen: ogow haddaba majiro reer bilaa diin ah, waxaa jira waxa sababaya inay u hoggaasamaan oo ay kula dambeeyaan, marka waxaa ugu yeereenaa in ay cibaadad saxdaan inta aaney guursan.
Sirta labaad waxaa kamid ah inaad waxa isla aqridaan si aad isku fahamtaan waxa bulshada looga faa’iideenaya gurigaaga halaga helo oo haka soo baxaan, qasabna maaha in qof walba uu bulshada u shaqeeyo. Wax isla aqrinta waxa ay keeneysaa inaad isla kobacdaan maskax ahaan haddii kale waxaa imaaneysa in la is fahmi waayo waxyaabaha qaarna aad ku kala horeesaaan.
Sirta sedexaad waxaa weyaan inaad wax wadaagtaan howl walba iyo xaalad kasta inay idinka dhaxeyso, kadib waxaa imaanaya inaad saaxiibtaan.
Sirta kale waa inaad hadiyad isa siisaan, soo ma jeclid qofkaan – haddiyad u gee waa uu kusii jecleenayaa dareenka uu ku qabana waa uu siyaadayaa’e.
Tan xigta, canaanta yaree bini’aadamku waa qaldamaa qofkana waa gafi karaa isu dulqaata mar walba oo uu qofka kaa dareemo dulqaad waa uu kaa xishoonayaa marka dambe, midda kale u cudur daar Nabiga N.N.K.H waxa uu na faray in qofka 70jeer loo cudur daaro. Marka dhalinyarada la yahay inta badan lama dulqaato waa waxyaabaha keena inuu guriga burburo, eeg waxa halaabay iyo inuu gurigaan burburo keebaa culus, in kasta oo qaladaadka ay kala xoog badan yihiin uu fiiri mar wlba inta uu la’eg yahay.
Sidaas oo kale, sirta waxaa ka mid ah in xuduud lakala yeesho oo qofba qofka kale xuduudiisa uu u qadariyo: yacni waxaa doonayo hadaa kaa sameeyo waxa ay ka dhigan tahy inaan ku ixtiraameyn ku xushmeeneen, jirtaankaaga ma qiimeynayo nolol maaha nolol qeylo iyo buuq joogta ah. Waxaad arkeysaa mararka qaar qoys is haysta oo baraha bulshada lasoo dhigayo ‘Subxaanallaah’ baraha bulshada waxaa ku kulmay dad wanaagsan iyo dad aan wanaagsaneyn markaan ka sheekeeneyno waa inaan asturnaa ileen wax bannaan yaalo majiraan diinteena wax walba hab ku haboon ayay leeyihiin in lagu soo bandhigo. In la isku muujiyo maaha in si qaawan in lagu soo bandhigo ku dayo Nabi Muxamed N.N.K.H.
Muujintaas diintu ina fareyso waxaa kusoo dhaweenaysaa qalbiga qofka kuuna suuragalinaysaa inaad hanato qofkaan, waxaan dhahayaa marka aad nin tahay muuji xaaskaaga wanaageeda, ha muujin waxyaabaha ay ku liidato, qofka banaanka haku sheegin.
Intaas aan soo sheegay sirta ayay kamid tahay guriga uu ku nagaan karo loogana fogaan karo furiinka Jasaakallaahi Kheyr” Yaa Fardawsa.
Qore: Fardowsa Sheikh Abdiraxman.
Previous: Dhallinyaradu waa is-beddelka Bulsho kasta!
Next: Warbixin: Dumarka oo – tiro iyo tayaba – ragga kula tartami kara Mihnadda Saxaafadda
Koox Muslimiin ah oo Nugulka baahan la gaaraya Cunnooyin.